I-YAOVA PET Stretch Blow Molding Machine Abakhiqizi nabaphakeli - China YAOVA PET Stretch Blow Molding Machine Factory
YAOVA PET Nweba Blow Molding Machine
Umshini wethu wokubumba umshini we-extrusion usetshenziswa kabanzi emikhiqizweni esetshenziswa nsuku zonke, ibhodlela lamanzi ezemidlalo, ibhodlela lezibulala-zinambuzane, ibhodlela lemithi, ibhodlela lezimonyo, isitsha sokupakisha ukudla, izingxenye zefenisha, izingxenye zezimoto, ithoyizi, ijeri kanye nezinye ipulasitiki elingenalutho imikhiqizo. Ukusekelwa okuhlala njalo kokusekelwa kuyithuluzi lethu lensiza elihamba phambili. Kuzo zonke izigaba zephrojekthi yakho, silapha ukunikeza izeluleko zobuchwepheshe. Ukwaneliseka kwakho kusipiliyoni sokuthenga kuyinto enhle kithi. Sizibophezele nasekugcwaliseni ukusebenza kahle kokukhiqiza kwakho ngokusemandleni ngenhloso yokubambisana kwe-win-win.
IPHEPHA LEPHEPHA LOKUDLULA / IPHINI LENEMA
UBISI LWEBHODLELA LOBISI
Blow Ukubumba MACHINE TVA 20L-500L
I-FUEL BOTTLE CHEMICAL DRUM CIVIL BARREL MACHINE
UKUQHUBEKA LOKUGQIBELA umshini OBULAYO ​​1L-30L
Umshini omkhulu wokushaya othomathikhi we-PET
Njengoba uchungechunge lwethu olujwayelekile, lusebenza kahle futhi iminyaka yentuthuko nokwenza ngcono kunqobe ukubongwa okubanzi okuvela kumakhasimende ethu. Ukuthengiswa komhlaba wonke ngonyaka kufinyelele kumakhulu amasethi 2.Lolu hlobo lufanele amabhodlela ezilwane ngobukhulu obuhlukile nobubunjwa be-3.Preform bufakwe kahle futhi bushe ngokulinganayo nangokufudumala ngamalambu e-infrared 4.Machine aqhutshwa yisilinda somoya esingenisiwe: ukuqina, akukho ukungcola futhi umsindo ongaphakeme 5.High ezishintshayo kanye intelligence 6.High ingcindezi igesi alulame iyunithi kungenziwa yakhelwe futhi asetshenziselwa ongaphakeme ingcindezi ukunyakaza. I-7.HMI ene-PLC yenza ukusebenza kube lula futhi kube lula
Imodeli yentamo ebanzi ye-SBM ebanzi ngokuphelele
Le modeli ilungele ukushaya ibhodlela lesilwane somlomo obanzi, njenge-zip-top can, imbiza encane noma enkulu, njll. 2.Preform isingene kahle futhi yashiswa ngokulinganayo nangokufudumele ngamalambu we-infrared. I-3.Machine iqhutshwa yisilinda somoya esingenisiwe: ukuqina, akukho ukungcola nomsindo ophansi. Ukuzenzekelayo okuphezulu kwe-4. 5.High ingcindezi yokutakula igesi iyunithi kungenziwa yakhelwe futhi asetshenziselwa ongaphakeme ingcindezi ukunyakaza. I-6.HMI ene-PLC yenza ukusebenza kube lula futhi kube lula
Imodeli yejubane le-Servo automatic SBM-High
Le modeli igcina amandla, izisebenzele kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa. Ama-2.Imported brand asetshenziswa emshinini, kufaka phakathi izinto zomoya, amabheringi, izingxenye zikagesi, njll. 3.Umshini uqhutshwa yi-servo, okwenza ukubeka kwangaphambili ukubeka phambili kusheshe futhi kuzinze. I-unit ye-clamping yenzelwe ukuqhutshwa nge-servo, ukonga amandla, ukuzinza nokusebenza kahle, ngaphandle komsindo. 5.High ingcindezi yokutakula igesi iyunithi kungenziwa yakhelwe futhi asetshenziselwa ongaphakeme ingcindezi ukunyakaza. I-6.HMI ene-PLC yenza ukusebenza kube lula futhi kube lula.
Okuphakelayo okuzenzakalelayo okungama-SBM okuzenzakalelayo
Ukusebenza kwe-1.Easy nokugcinwa okulula. Iphutha lingatholakala ngokushesha kukhompyutha futhi kube lula ngabantu bokulungisa ukuqeda. Amandla asetshenziswe kahle kanye nezinga eliphezulu lokuqedwa, futhi ikhwalithi yayo iqinisekiswa ngamalambu wokushisa anokwethenjelwa- amalambu we-infrared kanye nesikhunta esisetshenzwe kahle Isakhiwo se-Mechanical kuyinto elula futhi isikhala esincane siyadingeka.
Umshini webhodlela we-PET othomathikhi othomathikhi
Umshini wokushaya ojwayelekile we-PET othomathikhi